Final Fantasy XIV ကစားမယ်ဆို ဘာတွေ သိထားသင့်လဲ? ဘယ်လို ဝယ်ရလဲ?
Final Fantasy XIV ဂိမ်းဟာ အခုလက်ရှိမှာ လစဉ်ကြေးနှင့် ကစားရတဲ့ လူကစားအများဆုံး အွန်လိုင်းဂိမ်းစာရင်းမှာ နံပါတ် ၂ နေရာ မှာ ရှိနေပါတယ် ။ ဒီလိုနာမည်ကြီး အွန်လိုင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Final Fantasy XIV ကို စမ်းကစားချင်ကြတဲ့သူတွေ ရှိမှာပါ ။ အခုပြောပြမှာကတော့ Final Fantasy XIV ဂိမ်းက ဘယ်လိုလဲ? ကစားမယ်ဆို ဘာတွေ သိထားသင့်လဲ? ဘယ်လို ဝယ်ရမယ် ဆိုတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Final Fantasy XIV က ဘယ်လိုဂိမ်းမျိုးလဲ?
Final Fantasy XIV ဟာ MMORPG (massive multiplayer online role playing game) အမျိုးအစားတစ်ခုပါ ။ ကစားသူက character တစ်ယောက်တည်းကို ထိန်းချုပ်ပြီး ဇာတ်လမ်းအလိုက် ကစားရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဇာတ်လမ်းသွားချည်းပဲလား? တစ်ယောက်တည်းပဲ ကစားရမှာလား?
RPG မှတော့ ဇာတ်လမ်းသွားကတော့ ကစားရမှာပဲလေ ။ ဇာတ်လမ်းသွား ကစားမှသာ content တွေ တဖြည်းဖြည်း unlock ဖြစ်လာပြီး ကစားရ ပိုပိုကောင်းလာမှာပေါ့ ။ ဇာတ်လမ်းသွားကတော့ တစ်ယောက်တည်း ကစားရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် တချို့နေရာတွေမှာဆို တခြား player အားတွေလည်း လိုအပ်တယ် ။ ​ပြောရမယ်​ဆို တခြား player တွေနဲ့ ပေါင်းစု ကစားရတဲ့ အချိန်တွေလည်း ရှိတယ်လို့ ပြောတာ ။
ဇာတ်လမ်း Story ကတော့ FF XIV ရဲ့ တကယ့် အနှစ် ပဲ။ TV series တစ်ခုလို update တစ်ခုထွက်တိုင်း story နဲ့ content တွေက ပိုတိုးသွားတယ်။ စစပိုင်းကတော့ သာမာန် "Evil Empire vs Good guys" and save-the-world RPG plot ကနေပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နိုင်ငံရေး အာဏာပြိုင်တာတွေ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ corruption တွေ၊ လူမျိုးရေးပြသနာတွေ၊ နန်းတွင်းအရှုပ်တော်ပုံတွေ နဲ့ဇာတ်အိမ်က ကြီးလာတယ်။ Developer တွေပြောတဲ့ပုံအရ Story တစ်ခုလုံးက နောက်လေးနှစ်လောက်နေမှပြီးမှာဆိုပဲ။ Story ကို rush လုပ်ပြီးဆော့သွားရင်တော့ ဘာအရသာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ သတိထားရမယ်။
PvP တွေ PvE တွေပါပေမယ့် PvP ကတော့ အမှန်ပြောရရင် အဲ့လောက်ထိ focus သိပ်မလုပ်ထားဘူး။ Final Fantasy XIV ရဲ့ design philosophy ကိုက narrative/story နဲ့ team-play ကိုအဓိကထားတော့ PvE က main-focus ပဲ။ Game ရဲ့ အကောင်းဆုံး item set တွေကို အခက်ဆုံး PvE raid တွေကပဲရတယ်။ ဆိုတော့ End-Game focus က PvE ပဲ။
MMORPG ဆိုတော့ online လိုတာပေါ့နော် ။ offline ကော မရှိဘူးလား?
MMORPG ဆိုမှတော့ online လိုတယ်လေ ။ offline လုံးဝ မရှိဘူး ။ world တွေ အများကြီး server တွေ အများကြီး player တွေ အတုလုပ်ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စကြီး ။ ပြီးတော့ mmorpg ဆိုတာ player ရှိမှ mmorpg မည်တာလေ ။ ဒါကြောင့် offline လုံးဝ ကစားမရဘူး ။
Final Fantasy XIV ရဲ့ Battle-System ကဘယ်လိုလဲ?
Final Fantasy XII ရဲ့ battle system နဲ့ဆင်ပါတယ်။ Final Fantasy XII ကို speed up/Steamline လုပ်ထားတဲ့ပုံမျိုးပါ။ ချတာတွေအရမ်းမြန်နေတော့ action-RPG ပုံစံထင်ရပေမယ် တကယ်က pure RPG ပါ။ ကိုယ် ခလုပ်ကို ဘယ်လောက်မြန်မြန်နှိပ်နိုင်သလဲ ဘယ်လိုရှောင်ပြီး ဘယ်လိုချရမယ်ဆိုတာထက် ဘယ် skill ကို ဘယ်အချိန်မှာသုံးရမယ် ဘာ skill နဲ့ တွဲသုံးရမယ် စတာမျိုးကပို အဓိကဖြစ်တဲ့ Skill-Rotation based combat ပါ။ Dungeon တွေဝင်ရင်တော့ role synergy လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ်ယူထားတဲ့ class ရဲ့ role အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ teamwork ညီညီကစားတာက ပိုအဓိကကျတယ်။ (အဲ့လိုမဆော့ဘူးဆိုလည်းအကုန်ကြွပြီသာမှတ်)
Combat class 11 ခု နဲ့ Job (Advance Class) က 14 ခုရှိတယ်။ FF XIV ရဲ့အဓိကအားသာချက်က ကိုယ်ရဲ့ class တွေ job တွေကို ဘာ penalty မှမရှိ ဘယ် class မဆို ကြိုက်တဲ့အချိန် ကောက်ပြောင်းလို့ရတယ် ဆိုတော့ ကိုယ်က Tank လုပ်ရတာပျင်းလာလို့ DPS လုပ်ချင်ရင် character အသစ်ထပ်လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် အခြေအနေအပေါ် မူတည်ပြီးဆော့လို့ရတယ်။
Open World လား? Playerbase များလား?
World of Warcraft လို open world ကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ Graphically detailed ဆောက်ထားတဲ့ Area တွေကို တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ ဆက်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် သွားလို့ရတဲ့ area တွေ အကုန်ဆက်လိုက်ရင်တော့ Final Fantasy XIV ရဲ့ ကမ္ဘာက တော်တော်ကြီးတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ Mount တွေဘာတွေမရသေးခင် တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာကိုလမ်းလျှောက်သွားရတုန်းကဆို အချိန်တော်တော်ကုန်ပါတယ်။
လူများတာကတော့ server ပေါ်မူတည်မယ်။ မြန်မာတွေ အဆော့များတဲ့ Japan-based Data server ဆိုရင် register လုပ်ဖို့တောင် မနက် ၅ နာရီထိ စောင့်ရတယ် ။ PC, PS4 , PS3 server တစ်ခုထဲမှာ cross-play လို့ရတော့ လူကြိုက်များတဲ့ server ကတော့ လူများတယ်။
ဝယ်ဆော့ချင်တယ် ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
ဘယ်သူ့အကူအညီမှ မယူပဲ Final Fantasy XIV ဂိမ်း ကစားမယ်ဆိုရင် account ၂ ခု လိုပါတယ် ။ Square Enix Store account နှင့် Mog Station account ပါ ။ Square Enix Store Account က ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်တာ ဥပမာ expansion တွေ ဝယ်ရတဲ့ အပြင် တခြား ဂိမ်းတွေ ဖြစ်တဲ့ Final Fantasy X တို့ Tom Raider တို့လို ဂိမ်းတွေလည်း ဝယ်လို့ ရပါသေးတယ် ။ account ဖွင့်ခ free ပါ ။ Mog Station ကျတော့ Final Fantasy XIV ဂိမ်းဆော့ဖို့အတွက် account ပါ ။ သူလည်း free ဖွင့်လို့ရတယ် ။ Final Fantasy XIV online trial version ကို ဒီ mog Station ကနေ ကစားလို့ရတယ် ။ Final Fantasy XIV online ကတော့ Final Fantasy XIV: A Realm Reborn ဖြစ်ပါတယ် ။
Final Fantasy XIV ကို ဝယ်ချင်ရင် PlayStation User တွေဆို PSN store မှာ ဝယ်လို့ ရတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့် PSN account က US region မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ account ဖြစ်ရပါမယ် ။ နောက်ပြီး ကစားဖို့ ဖွင့်ရတဲ့ Mog Station account လည်း US region ကပဲ ဖွင့်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဆိုလိုတာကတော့ PSN account region နှင့် Mog Station account region တို့ဟာ တူညီနေရပါမယ် ။ ဘာဖြစ်လို့ US region မှာ ဖွင့်တာ ဖြစ်ရမယ်လို့ ပြောရတာလဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာ Final Fantasy XIV ကို ကစားရင် US region မှာမှ အဆင်ပြေလို့ပါပဲ ။ PlayStation user သမားအနေနဲ့ game data ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် download လုပ်ရမယ် ။ ဝယ်ပြီး သူများဆီက data ယူထည့်လို့ မရဘူး ။ အခွေ ဝယ်လို့တော့ ရပေမယ့် မြန်မာပြည်အနေနဲ့ဆို ဝယ်ရတာ တော်တော်ခက်တယ် ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဟာကိုယ် download ဆွဲဖို့ ပြောရတာပါ ။ Final Fantasy XIV တစ်မျိုးတည်းဆိုရင် 11.33GB လောက် ရှိတယ် ။ expansion တွေ အကုန် ပါလာမယ် ဆိုရင်တော့ 23 GB လောက် ရှိပါတယ် ။ website တွေမှာ ရေးထားတာကတော့ အခု နောက်ဆုံးထွက် expansion patch အပါအဝင် အားလုံးပေါင်းဆိုရင် Hard drive free space 60GB လိုတယ်လို့ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Key ကို PlayStation Store မှာ ဝယ် ၊ Mog Station မှာ account ဖွင့်ပြီး ကိုယ့် PS4 ID နဲ့ ချိတ်ပြီး Key ထည့် ၊ ပြီးရင် ပိတ်ပြီး ကိုယ့် PS4 ထဲ ဝင် Game launcher ကို download ချ ၊ launcher ထဲ ခုနက ဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ Mog Station account နဲ့ ဝင်လိုက်ရင် ဂိမ်း register ဖြစ်ပြီး data download ဆွဲပါလိမ့်မယ် ။ data download ဆွဲပြီးရင်တော့ ဝင်ပြီး ကစားလို့ ရပါပြီ ။ (PC ပဲ ဆော့ဖူးသမား ဆိုတော့ PS4 အကြောင်း သိပ်မသိပါဘူး .... လိုအပ်တာတွေလည်း ရှိပါလိမ့်မယ် ... မရှင်းရင် မေးနိုင်ပါတယ် ... နားလည်သူတွေဆီ မေးပြီး ပြန်ဖြေပေးပါ့မယ်)
PC မှာ Final Fantasy XIV ကို digital ပဲ ဝယ်နိုင်ပါတယ် ။ အခွေရှိပေမယ့် မြန်မာပြည်အနေနဲ့ ဝယ်ရတာ မလွယ်ဘူး ။ ဒါကြောင့် digital ပဲ ဝယ်ဆော့ကြတာ များတယ် ။ Final Fantasy XIV PC version ကို ဝယ်ချင်ရင်တော့ version ၂ မျိုးရှိပါတယ် ။ steam version နှင့် official website ဖြစ်တဲ့ Square Enix Store က ဝယ်လို့ရတဲ့ version ဆိုပြီးတော့ပါ ။ Steam မှာရောင်းနေတာကတော့ steam wallet ရှိနေတော့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဝယ်ရတာ လွယ်တယ် ။ ဒါပေမယ့် account က US region မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ account မှ အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Mog Station ဖွင့်တဲ့ account region နှင့် ဂိမ်းဝယ်တဲ့ account region က တူမှ ရမှာမို့လို့ပါ ။ ဆိုးတဲ့တချက်က Square Enix က မြန်မာနိုင်ငံကို မသိတော့ US region ပဲ ထားဖွင့်လို့ ရတာပဲ ဖြစ်တယ် ။
PC မှာ data ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် download ဆွဲယူနိုင်သလို သူများဆီက download ဆွဲပြီးသား ဒါမှမဟုတ် သူများ ကစားနေဆဲ data ကို ယူလို့ရတယ် ။ PC data size ကျတော့ Final Fantasy XIV online ခဲခဲ ဆိုရင် 12GB လောက်ရှိတယ် ။ expansion အကုန် ပါလာရင်တော့ လက်ရှိမှာ 30.2 GB ပမာဏလောက် ရှိနေပါပြီ ။ အဲ့လိုဆိုတော့ down ရတာ စိတ်မရှည်ရင် ဂိမ်းဝယ်ပြီး သူများဆီက data တောင်းလိုက်ရုံပါပဲ ။ Steam Version ဝယ်ချင်ရင် steam မှာ ဝယ် ၊ ဆော့ဖို့ Mog Station မှာ account ဖွင့်ပြီး Key ထည့် ၊ steam client ကနေတဆင့် mog station account နဲ့ ဝင် ပြီး ဆော့ရုံပါပဲ ။ ရိုးရိုး PC version ဆော့ချင်ရင်တော့ Square Enix Store မှာ ဂိမ်းဝယ် ၊ Mog Station account မှာ Key ထည့် ပြီးရင် FFXIV game launcher ကို official website ကနေ download ချ ၊ Mog Station account နဲ့ ဝင် ၊ game data file download ချ ပြီးရင် ဝင်ဆော့လို့ ရပါပြီ ။
တခု သတိထားရမှာက Steam version မှာ Final Fantasy XIV expansion တွေက ဝယ်ရခက်တယ် ။ steam မှာ ရောင်းတာ မှန်ပေမယ့် သူ့ official website ဖြစ်တဲ့ square enix store မှာ ရောင်းတာထက် ဈေးပိုကြီးတယ် ။ နောက်ပြီး တချို့နေရာတွေမှာ ဥပမာ pre-order မှာတာတို့ game မှာ ပြသနာတက်ရင် ဖြေရှင်းတဲ့အပိုင်းမှာ နဲနဲခက်ခဲတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျနော်ကတော့ Square Enix Store ကပဲ ဝယ်ပြီး game launcher ကနေပဲ ဆော့တော့ အဲ့လို ပြသနာတွေ တက်တာ မရှိသလို တခါမှ မကြုံဖူးပါဘူး ။
> ဂိမ်းအမျိုးအစား နှင့် ဝယ်နည်း
Official website ဖြစ်တဲ့ Square Enix Store မှာ ဂိမ်းကို ဝယ်ဖို့ဆိုရင် account ဖွင့်ရပါတယ် ။ account ဖွင့်ခ ကတော့ free ပါ ။ အဲ့ဒီမှာ account မဖွင့်ချင်ဘူး ဝယ်လောက်ပဲ ဝယ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Square Enix Store account ရှိပြီးသား သူတွေဆီက ဝယ်ခိုင်းလို့ ရပါတယ် ။ ဂိမ်းက key လောက်ပဲ ဝယ်ရတာမို့လို့ပါ ။ Final Fantasy XIV မှာက ၃ ပိုင်း ရှိပါတယ် ။ Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, Final Fantasy XIV: Heavensward နှင့် Final Fantasy XIV: Stromblood ဆိုပြီးတော့ပါ ။ A Realm Reborn က main game ဖြစ်ပြီး Heavensward နှင့် Stromblood တို့က expansion တွေဖြစ်ပါတယ် ။ A Realm Reborn မှာက level အမြင့်ဆုံး 50 ဖြစ်ပြီး Heavensward မှာ 60 ၊ Stromblood က 70 ဖြစ်ပါတယ် ။ အမှန်တကယ် ကစားရ အကောင်းဆုံးကတော့ Stromblood ပါ ။ level cap လည်း အမြင့်ဆုံး ဖြစ်သလို content တွေ အများဆုံး ဖြစ်တဲ့အပြင် အဓိကက story အပိုင်း မတရား စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလာတာပါပဲ ။ ပြီးတော့ လက်ရှိ ကစားနေကျ player အများစုက Stromblood expansion မှာမှ သွားလာနိုင်တဲ့ area တွေမှာပဲ စုပြုံနေကြတာမို့ A realm reborn ဝယ်ပြီး ကစားတဲ့သူတွေ အမြင်မှာ player တွေ သိပ်မတွေ့ရတော့ ခြောက်ကပ်ကပ်ကြီး ဖြစ်သလို ခံစားရမှာပါ ။
Square Enix Store ကတော့ Visa card ၊ master card တွေ လက်ခံပါတယ် ။ အရင်တုန်းက မြန်မာပြည်အနေနဲ့ Visa card တွေ မရှိတုန်းကတော့ ဝယ်ရတာ ခက်ခဲတာပေါ့ ။ အခုကတော့ Visa card တွေ ရှိလာသလို မြန်မာပြည်က Visa Card တွေကိုလည်း လက်ခံလာပြီဆိုတော့ ဝယ်ရတာ အဆင်ပြေလာပါတယ် ။ မြန်မာပြည်က KBZ visa card တို့ CB Visa card တို့နဲ့ဆို ပြသနာမတက်တတ်ဘူး ။ ဝယ်ရတာ လွယ်ပါတယ် ။
Final Fantasy XIV က လစဉ်ကြေး subscription လိုတယ်ကြားတယ် ။ ဘယ်လို ဝယ်ရလဲ?
Final Fantasy XIV မှာ ကစားဖို့ လစဉ်ကြေး subscription လိုတာ မှန်ပါတယ် ။ subscription ကတော့ ဂိမ်းစဝယ်လိုက်တာနဲ့ ဂိမ်းနဲ့ ၁ လစာ subscription တွဲပါလာတာမို့လို့ ရက် ၃၀ စာ free အလကား ကစားရမှာပါ ။ နောက် ဆက်ကစားချင်ရင်တော့ subscription ကို Mog Station ကနေ ထည့်ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ထည့်နည်းကတော့ ၂ မျိုးရှိပါတယ် ။ Visa card နဲ့ ထည့်နည်းနှင့် တဆင့်ခံဖြစ်တဲ့ Crysta သုံးပြီး ထည့်နည်းပါ ။ Visa card နဲ့ ထည့်ရတဲ့ နည်းကတော့ ကိုယ့် Visa card ရဲ့ information တွေ ရိုက်ထည့်ပေးရပြီး payment မှာ Visa card နဲ့ ချိတ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Visa card နဲ့ လှမ်းချိတ်လိုက်ရင်တော့ subscription တစ်လစာ ကုန်တိုင်း ကိုယ့် Visa card ထဲက အလိုလို ဖြတ်သွားပြီး နောက်တစ်လစာ auto subscription လုပ်ပေးသွားပါတယ် ။ Visa card ထဲ $ ရှိသလောက် သူက auto နှုတ်ယူသွားတယ် ။ ဒါကို recurring လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ ဒီလိုနည်းကိုတော့ boss တွေကလွဲလို့ ကျန်တဲ့သူတွေ သိပ်မသုံးကြဘူး ။ Crysta အသုံးပြုထည့်နည်းကတော့ လူသုံးများကြပါတယ် ။ Crysta ကတော့ Final Fantasy XIV မှာ သုံးရလွယ်အောင် ဖန်တီးထားတဲ့ Square Enix ရဲ့ ငွေကြေးလှဲလှယ်ပစ္စည်း တစ်ခုပါ ။ Crysta ကို Visa Card နဲ့ ဝယ်ရပါတယ် ။ Crysta ကို အနည်းဆုံး 5$ ကနေ အများဆုံး $100 အထိ ဝယ်လို့ရတယ် ။ 1$ = 100 Crysta .... 5$ ဆို Crysta 500 ရမယ် ။ အဲ့ဒီ Crysta နဲ့မှ Subscription ဝယ်လို့ရသလို Mog Station မှာ ရောင်းနေတာတွေ ဝယ်လို့ရတယ် ။ Crysta နဲ့ ဝယ်နည်းသုံးရင် Visa card ကို ချိတ်စရာမလိုဘူး ။ ရိုးရိုး အွန်လိုင်းပေါ် ပစ္စည်းတွေ ဝယ်သလို ဂိမ်းဝယ်သလို ဒီအတိုင်း ဝယ်ရုံပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် Crysta ပိုနေလို့ ဆိုပြီး သူများကို လွှဲပေးလို့ မရပါဘူး ။ ဒါကြောင့် Crysta ကို ကိုယ်လိုသလောက် ဆော့နိုင်သလောက် ဝယ်ထည့်ပြီး ဆော့တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ။ ကျနော်တော့ crysta ပဲ လိုသလောက် ဝယ်ထည့်ဆော့ပါတယ် ။
Subscription မှာ Entry (12.99$) နှင့် Standard (13.99$) ဆိုပြီး အမျိုးအစား ၂ မျိုး ရှိပါတယ် ။ Entry ကတော့ ဈေးနည်းတယ် ။ ရွေးချယ်စရာ ရက် ၃၀ စာ တစ်မျိုးပဲ ရှိတယ် ။ ဒါပေမယ့် Server တစ်ခုမှာ character တစ်ယောက်ပဲ ကစားခွင့်ရှိတယ် ။ server တစ်ခုမှာ character တစ်ယောက်စီနဲ့ ကိုယ် create လုပ်ပြီး ကစားနိုင်မယ့် character အရေအတွက်ကတော့ အများဆုံး ၈ ယောက်ပါ ။ Standard ကျတော့ ရွေးချယ်စရာများပြီး server တစ်ခုမှာ create လုပ် ကစားနိုင်မယ့် character အရေအတွက် ၈ ယောက် ဖြစ်သွားပါတယ် ။ server တစ်ခုမှာ character ၈ ယောက်စီနဲ့ server ၈ ခုမှာ ပြုလုပ်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း character အယောက် ၄၀ ဖန်တီး ကစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Crysta တွေ Visa card တွေမသုံးပဲ Game time card ဆိုတာ သုံးပြီး Subscription ထည့်နည်းရှိသေးတယ် ။ Game Time card ကတော့ key အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး standard နှုန်းနဲ့ ရက် ၆၀ စာ Subscription နဲ့ လာလေ့ရှိပါတယ် ။ Mog station မှာ key ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ ။ Game Time Card ကတော့ online market တော်တော်များများမှာ ရောင်းပါတယ် ။
Steam version ဝယ်ထားသူတွေအနေနဲ့ steam wallet ကို သုံးပြီး Subscription လုပ်လို့ရတယ် ။ ကိုယ့် Mog Station account ထဲ ဝင်လို့ Subscription payment method အကန့်အောက်မှာ ရွေးချယ်စရာ Steam wallet ဆိုတဲ့ option လေး ရှိနေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။ ဒီနေတဆင့် Subscription လုပ်လို့ရပါတယ် ။
PS4 မှာရော PC မှာပါ account တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ ကစားချင်တယ်။ ဒီလို ကစားလို့ရလား?
ကစားလို့ ရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ကစားဖို့ဆိုရင် account တစ်ခုတည်းမှာ PS4 version ရော PC version ပါ ဝယ်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Internet data အစား များလား?
ကျနော် တွက်ပြပါမယ် ။ ကျနော်က PC မှာ ကစားပါတယ် ။ ညနေ ၆ နာရီခွဲကနေ ည ၁၂ နာရီခွဲ အထိ မထတမ်း ကစားပါတယ် ။ ဒီလို ကစားတဲ့အချိန်မှာ Dungeon တွေ အဆက်မပြတ် ဝင်တယ် ။ Trial တွေ Raid တွေ ဝင်ကစားတယ် ။ ဂိမ်းထဲက တချက်မှ မထွက်ပဲ ကစားတာတောင် 50MB ကျော်ကျော်ပဲ ကုန်ပါတယ် ။ ဒါ ပုံမှန်ပါ ။ နောက်က ဘာ download ဆွဲ ညာ download ဆွဲတာ ရှိရင်တော့ 100mb ကျော် တက်သွားတတ်တယ် ။ PC ဆိုရင်တော့ သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ internet လိုင်းကို ဘယ်အပေါက်က ဆွဲနေကြမှန်းကို မသိဘူး ။ အဲ့ဒါတောင်မှ ဒီလောက်ပဲ ကုန်တာပါ ။ တခြား MOBA ဂိမ်းတွေထက် အတော်ကြီးကို data အဆွဲ နည်းပါတယ် ။
(စာထဲမှာ bro chit ko ရေးထားတဲ့ စာတွေ ညှပ်ထည့်ထားတာမို့ အဲ့ဒါတွေအတွက် bro chit ko ကို credit ပေးပါတယ် ။)
ဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ Final Fantasy XIV အခုမှ စ ကစားမယ့်သူတွေအတွက် အကူအညီ ဖြစ်လိမ့်မယ် မျှော်လင့်ပါတယ် ။
Final Fantasy XIV ကစားမယျဆို ဘာတှေ သိထားသငျ့လဲ? ဘယျလို ဝယျရလဲ?
Final Fantasy XIV ဂိမျးဟာ အခုလကျရှိမှာ လစဉျကွေးနှငျ့ ကစားရတဲ့ လူကစားအမြားဆုံး အှနျလိုငျးဂိမျးစာရငျးမှာ နံပါတျ ၂ နရော မှာ ရှိနပေါတယျ ။ ဒီလိုနာမညျကွီး အှနျလိုငျးဂိမျးတဈခုဖွဈတဲ့ Final Fantasy XIV ကို စမျးကစားခငျြကွတဲ့သူတှေ ရှိမှာပါ ။ အခုပွောပွမှာကတော့ Final Fantasy XIV ဂိမျးက ဘယျလိုလဲ? ကစားမယျဆို ဘာတှေ သိထားသငျ့လဲ? ဘယျလို ဝယျရမယျ ဆိုတာတှပေဲ ဖွဈပါတယျ ။
Final Fantasy XIV က ဘယျလိုဂိမျးမြိုးလဲ?
Final Fantasy XIV ဟာ MMORPG (massive multiplayer online role playing game) အမြိုးအစားတဈခုပါ ။ ကစားသူက character တဈယောကျတညျးကို ထိနျးခြုပျပွီး ဇာတျလမျးအလိုကျ ကစားရတာ ဖွဈပါတယျ ။
ဇာတျလမျးသှားခညျြးပဲလား? တဈယောကျတညျးပဲ ကစားရမှာလား?
RPG မှတော့ ဇာတျလမျးသှားကတော့ ကစားရမှာပဲလေ ။ ဇာတျလမျးသှား ကစားမှသာ content တှေ တဖွညျးဖွညျး unlock ဖွဈလာပွီး ကစားရ ပိုပိုကောငျးလာမှာပေါ့ ။ ဇာတျလမျးသှားကတော့ တဈယောကျတညျး ကစားရမှာ ဖွဈပမေယျ့ တခြို့နရောတှမှောဆို တခွား player အားတှလေညျး လိုအပျတယျ ။ ​ပွောရမယျ​ဆို တခွား player တှနေဲ့ ပေါငျးစု ကစားရတဲ့ အခြိနျတှလေညျး ရှိတယျလို့ ပွောတာ ။
ဇာတျလမျး Story ကတော့ FF XIV ရဲ့ တကယျ့ အနှဈ ပဲ။ TV series တဈခုလို update တဈခုထှကျတိုငျး story နဲ့ content တှကေ ပိုတိုးသှားတယျ။ စစပိုငျးကတော့ သာမာနျ "Evil Empire vs Good guys" and save-the-world RPG plot ကနပွေီး တဖွညျးဖွညျးနဲ့ နိုငျငံရေး အာဏာပွိုငျတာတှေ၊ ဘာသာရေးအဖှဲ့တှရေဲ့ corruption တှေ၊ လူမြိုးရေးပွသနာတှေ၊ နနျးတှငျးအရှုပျတျောပုံတှေ နဲ့ဇာတျအိမျက ကွီးလာတယျ။ Developer တှပွေောတဲ့ပုံအရ Story တဈခုလုံးက နောကျလေးနှဈလောကျနမှေပွီးမှာဆိုပဲ။ Story ကို rush လုပျပွီးဆော့သှားရငျတော့ ဘာအရသာမှရှိမှာမဟုတျဘူးဆိုတာတော့ သတိထားရမယျ။
PvP တှေ PvE တှပေါပမေယျ့ PvP ကတော့ အမှနျပွောရရငျ အဲ့လောကျထိ focus သိပျမလုပျထားဘူး။ Final Fantasy XIV ရဲ့ design philosophy ကိုက narrative/story နဲ့ team-play ကိုအဓိကထားတော့ PvE က main-focus ပဲ။ Game ရဲ့ အကောငျးဆုံး item set တှကေို အခကျဆုံး PvE raid တှကေပဲရတယျ။ ဆိုတော့ End-Game focus က PvE ပဲ။
MMORPG ဆိုတော့ online လိုတာပေါ့နျော ။ offline ကော မရှိဘူးလား?
MMORPG ဆိုမှတော့ online လိုတယျလေ ။ offline လုံးဝ မရှိဘူး ။ world တှေ အမြားကွီး server တှေ အမြားကွီး player တှေ အတုလုပျဖို့ ဆိုတာ မဖွဈနိုငျတဲ့ ကိစ်စကွီး ။ ပွီးတော့ mmorpg ဆိုတာ player ရှိမှ mmorpg မညျတာလေ ။ ဒါကွောငျ့ offline လုံးဝ ကစားမရဘူး ။
Final Fantasy XIV ရဲ့ Battle-System ကဘယျလိုလဲ?
Final Fantasy XII ရဲ့ battle system နဲ့ဆငျပါတယျ။ Final Fantasy XII ကို speed up/Steamline လုပျထားတဲ့ပုံမြိုးပါ။ ခတြာတှအေရမျးမွနျနတေော့ action-RPG ပုံစံထငျရပမေယျ တကယျက pure RPG ပါ။ ကိုယျ ခလုပျကို ဘယျလောကျမွနျမွနျနှိပျနိုငျသလဲ ဘယျလိုရှောငျပွီး ဘယျလိုခရြမယျဆိုတာထကျ ဘယျ skill ကို ဘယျအခြိနျမှာသုံးရမယျ ဘာ skill နဲ့ တှဲသုံးရမယျ စတာမြိုးကပို အဓိကဖွဈတဲ့ Skill-Rotation based combat ပါ။ Dungeon တှဝေငျရငျတော့ role synergy လို့ချေါတဲ့ ကိုယျယူထားတဲ့ class ရဲ့ role အပျေါမူတညျပွီးတော့ teamwork ညီညီကစားတာက ပိုအဓိကကတြယျ။ (အဲ့လိုမဆော့ဘူးဆိုလညျးအကုနျကွှပွီသာမှတျ)
Combat class 11 ခု နဲ့ Job (Advance Class) က 14 ခုရှိတယျ။ FF XIV ရဲ့အဓိကအားသာခကျြက ကိုယျရဲ့ class တှေ job တှကေို ဘာ penalty မှမရှိ ဘယျ class မဆို ကွိုကျတဲ့အခြိနျ ကောကျပွောငျးလို့ရတယျ ဆိုတော့ ကိုယျက Tank လုပျရတာပငျြးလာလို့ DPS လုပျခငျြရငျ character အသဈထပျလုပျစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယျ့စိတျကွိုကျ အခွအေနအေပျေါ မူတညျပွီးဆော့လို့ရတယျ။
Open World လား? Playerbase မြားလား?
World of Warcraft လို open world ကွီးမဟုတျပါဘူး။ Graphically detailed ဆောကျထားတဲ့ Area တှကေို တဈနရောနဲ့ တဈနရော ဆကျထားတာပါ။ ဒါပမေယျ့ သှားလို့ရတဲ့ area တှေ အကုနျဆကျလိုကျရငျတော့ Final Fantasy XIV ရဲ့ ကမ်ဘာက တျောတျောကွီးတယျလို့ ပွောလို့ရတယျ။ Mount တှဘောတှမေရသေးခငျ တဈနရောနဲ့တဈနရောကိုလမျးလြှောကျသှားရတုနျးကဆို အခြိနျတျောတျောကုနျပါတယျ။
လူမြားတာကတော့ server ပျေါမူတညျမယျ။ မွနျမာတှေ အဆော့မြားတဲ့ Japan-based Data server ဆိုရငျ register လုပျဖို့တောငျ မနကျ ၅ နာရီထိ စောငျ့ရတယျ ။ PC, PS4 , PS3 server တဈခုထဲမှာ cross-play လို့ရတော့ လူကွိုကျမြားတဲ့ server ကတော့ လူမြားတယျ။
ဝယျဆော့ခငျြတယျ ။ ဘယျလိုလုပျရမလဲ?
ဘယျသူ့အကူအညီမှ မယူပဲ Final Fantasy XIV ဂိမျး ကစားမယျဆိုရငျ account ၂ ခု လိုပါတယျ ။ Square Enix Store account နှငျ့ Mog Station account ပါ ။ Square Enix Store Account က ဂိမျးနဲ့ပတျသကျတာ ဥပမာ expansion တှေ ဝယျရတဲ့ အပွငျ တခွား ဂိမျးတှေ ဖွဈတဲ့ Final Fantasy X တို့ Tom Raider တို့လို ဂိမျးတှလေညျး ဝယျလို့ ရပါသေးတယျ ။ account ဖှငျ့ခ free ပါ ။ Mog Station ကတြော့ Final Fantasy XIV ဂိမျးဆော့ဖို့အတှကျ account ပါ ။ သူလညျး free ဖှငျ့လို့ရတယျ ။ Final Fantasy XIV online trial version ကို ဒီ mog Station ကနေ ကစားလို့ရတယျ ။ Final Fantasy XIV online ကတော့ Final Fantasy XIV: A Realm Reborn ဖွဈပါတယျ ။
Final Fantasy XIV ကို ဝယျခငျြရငျ PlayStation User တှဆေို PSN store မှာ ဝယျလို့ ရတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့ PSN account က US region မှာ ဖှငျ့ထားတဲ့ account ဖွဈရပါမယျ ။ နောကျပွီး ကစားဖို့ ဖှငျ့ရတဲ့ Mog Station account လညျး US region ကပဲ ဖှငျ့ထားရမှာ ဖွဈပါတယျ ။ ဆိုလိုတာကတော့ PSN account region နှငျ့ Mog Station account region တို့ဟာ တူညီနရေပါမယျ ။ ဘာဖွဈလို့ US region မှာ ဖှငျ့တာ ဖွဈရမယျလို့ ပွောရတာလဲဆိုတော့ မွနျမာပွညျမှာ Final Fantasy XIV ကို ကစားရငျ US region မှာမှ အဆငျပွလေို့ပါပဲ ။ PlayStation user သမားအနနေဲ့ game data ကို ကိုယျ့ဟာကိုယျ download လုပျရမယျ ။ ဝယျပွီး သူမြားဆီက data ယူထညျ့လို့ မရဘူး ။ အခှေ ဝယျလို့တော့ ရပမေယျ့ မွနျမာပွညျအနနေဲ့ဆို ဝယျရတာ တျောတျောခကျတယျ ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ဟာကိုယျ download ဆှဲဖို့ ပွောရတာပါ ။ Final Fantasy XIV တဈမြိုးတညျးဆိုရငျ 11.33GB လောကျ ရှိတယျ ။ expansion တှေ အကုနျ ပါလာမယျ ဆိုရငျတော့ 23 GB လောကျ ရှိပါတယျ ။ website တှမှော ရေးထားတာကတော့ အခု နောကျဆုံးထှကျ expansion patch အပါအဝငျ အားလုံးပေါငျးဆိုရငျ Hard drive free space 60GB လိုတယျလို့ ဖျောပွထားတာ တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ ။ Key ကို PlayStation Store မှာ ဝယျ ၊ Mog Station မှာ account ဖှငျ့ပွီး ကိုယျ့ PS4 ID နဲ့ ခြိတျပွီး Key ထညျ့ ၊ ပွီးရငျ ပိတျပွီး ကိုယျ့ PS4 ထဲ ဝငျ Game launcher ကို download ခြ ၊ launcher ထဲ ခုနက ဖှငျ့ထားခဲ့တဲ့ Mog Station account နဲ့ ဝငျလိုကျရငျ ဂိမျး register ဖွဈပွီး data download ဆှဲပါလိမျ့မယျ ။ data download ဆှဲပွီးရငျတော့ ဝငျပွီး ကစားလို့ ရပါပွီ ။ (PC ပဲ ဆော့ဖူးသမား ဆိုတော့ PS4 အကွောငျး သိပျမသိပါဘူး .... လိုအပျတာတှလေညျး ရှိပါလိမျ့မယျ ... မရှငျးရငျ မေးနိုငျပါတယျ ... နားလညျသူတှဆေီ မေးပွီး ပွနျဖွပေေးပါ့မယျ)
PC မှာ Final Fantasy XIV ကို digital ပဲ ဝယျနိုငျပါတယျ ။ အခှရှေိပမေယျ့ မွနျမာပွညျအနနေဲ့ ဝယျရတာ မလှယျဘူး ။ ဒါကွောငျ့ digital ပဲ ဝယျဆော့ကွတာ မြားတယျ ။ Final Fantasy XIV PC version ကို ဝယျခငျြရငျတော့ version ၂ မြိုးရှိပါတယျ ။ steam version နှငျ့ official website ဖွဈတဲ့ Square Enix Store က ဝယျလို့ရတဲ့ version ဆိုပွီးတော့ပါ ။ Steam မှာရောငျးနတောကတော့ steam wallet ရှိနတေော့ မွနျမာနိုငျငံအနနေဲ့ ဝယျရတာ လှယျတယျ ။ ဒါပမေယျ့ account က US region မှာ ဖှငျ့ထားတဲ့ account မှ အဆငျပွမှော ဖွဈပါတယျ ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ Mog Station ဖှငျ့တဲ့ account region နှငျ့ ဂိမျးဝယျတဲ့ account region က တူမှ ရမှာမို့လို့ပါ ။ ဆိုးတဲ့တခကျြက Square Enix က မွနျမာနိုငျငံကို မသိတော့ US region ပဲ ထားဖှငျ့လို့ ရတာပဲ ဖွဈတယျ ။
PC မှာ data ကို ကိုယျ့ဟာကိုယျ download ဆှဲယူနိုငျသလို သူမြားဆီက download ဆှဲပွီးသား ဒါမှမဟုတျ သူမြား ကစားနဆေဲ data ကို ယူလို့ရတယျ ။ PC data size ကတြော့ Final Fantasy XIV online ခဲခဲ ဆိုရငျ 12GB လောကျရှိတယျ ။ expansion အကုနျ ပါလာရငျတော့ လကျရှိမှာ 30.2 GB ပမာဏလောကျ ရှိနပေါပွီ ။ အဲ့လိုဆိုတော့ down ရတာ စိတျမရှညျရငျ ဂိမျးဝယျပွီး သူမြားဆီက data တောငျးလိုကျရုံပါပဲ ။ Steam Version ဝယျခငျြရငျ steam မှာ ဝယျ ၊ ဆော့ဖို့ Mog Station မှာ account ဖှငျ့ပွီး Key ထညျ့ ၊ steam client ကနတေဆငျ့ mog station account နဲ့ ဝငျ ပွီး ဆော့ရုံပါပဲ ။ ရိုးရိုး PC version ဆော့ခငျြရငျတော့ Square Enix Store မှာ ဂိမျးဝယျ ၊ Mog Station account မှာ Key ထညျ့ ပွီးရငျ FFXIV game launcher ကို official website ကနေ download ခြ ၊ Mog Station account နဲ့ ဝငျ ၊ game data file download ခြ ပွီးရငျ ဝငျဆော့လို့ ရပါပွီ ။
တခု သတိထားရမှာက Steam version မှာ Final Fantasy XIV expansion တှကေ ဝယျရခကျတယျ ။ steam မှာ ရောငျးတာ မှနျပမေယျ့ သူ့ official website ဖွဈတဲ့ square enix store မှာ ရောငျးတာထကျ စြေးပိုကွီးတယျ ။ နောကျပွီး တခြို့နရောတှမှော ဥပမာ pre-order မှာတာတို့ game မှာ ပွသနာတကျရငျ ဖွရှေငျးတဲ့အပိုငျးမှာ နဲနဲခကျခဲတာကို တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ ။ ကနြျောကတော့ Square Enix Store ကပဲ ဝယျပွီး game launcher ကနပေဲ ဆော့တော့ အဲ့လို ပွသနာတှေ တကျတာ မရှိသလို တခါမှ မကွုံဖူးပါဘူး ။
> ဂိမျးအမြိုးအစား နှငျ့ ဝယျနညျး
Official website ဖွဈတဲ့ Square Enix Store မှာ ဂိမျးကို ဝယျဖို့ဆိုရငျ account ဖှငျ့ရပါတယျ ။ account ဖှငျ့ခ ကတော့ free ပါ ။ အဲ့ဒီမှာ account မဖှငျ့ခငျြဘူး ဝယျလောကျပဲ ဝယျခငျြတယျ ဆိုရငျတော့ Square Enix Store account ရှိပွီးသား သူတှဆေီက ဝယျခိုငျးလို့ ရပါတယျ ။ ဂိမျးက key လောကျပဲ ဝယျရတာမို့လို့ပါ ။ Final Fantasy XIV မှာက ၃ ပိုငျး ရှိပါတယျ ။ Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, Final Fantasy XIV: Heavensward နှငျ့ Final Fantasy XIV: Stromblood ဆိုပွီးတော့ပါ ။ A Realm Reborn က main game ဖွဈပွီး Heavensward နှငျ့ Stromblood တို့က expansion တှဖွေဈပါတယျ ။ A Realm Reborn မှာက level အမွငျ့ဆုံး 50 ဖွဈပွီး Heavensward မှာ 60 ၊ Stromblood က 70 ဖွဈပါတယျ ။ အမှနျတကယျ ကစားရ အကောငျးဆုံးကတော့ Stromblood ပါ ။ level cap လညျး အမွငျ့ဆုံး ဖွဈသလို content တှေ အမြားဆုံး ဖွဈတဲ့အပွငျ အဓိကက story အပိုငျး မတရား စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးလာတာပါပဲ ။ ပွီးတော့ လကျရှိ ကစားနကြေ player အမြားစုက Stromblood expansion မှာမှ သှားလာနိုငျတဲ့ area တှမှောပဲ စုပွုံနကွေတာမို့ A realm reborn ဝယျပွီး ကစားတဲ့သူတှေ အမွငျမှာ player တှေ သိပျမတှရေ့တော့ ခွောကျကပျကပျကွီး ဖွဈသလို ခံစားရမှာပါ ။
Square Enix Store ကတော့ Visa card ၊ master card တှေ လကျခံပါတယျ ။ အရငျတုနျးက မွနျမာပွညျအနနေဲ့ Visa card တှေ မရှိတုနျးကတော့ ဝယျရတာ ခကျခဲတာပေါ့ ။ အခုကတော့ Visa card တှေ ရှိလာသလို မွနျမာပွညျက Visa Card တှကေိုလညျး လကျခံလာပွီဆိုတော့ ဝယျရတာ အဆငျပွလောပါတယျ ။ မွနျမာပွညျက KBZ visa card တို့ CB Visa card တို့နဲ့ဆို ပွသနာမတကျတတျဘူး ။ ဝယျရတာ လှယျပါတယျ ။
Final Fantasy XIV က လစဉျကွေး subscription လိုတယျကွားတယျ ။ ဘယျလို ဝယျရလဲ?
Final Fantasy XIV မှာ ကစားဖို့ လစဉျကွေး subscription လိုတာ မှနျပါတယျ ။ subscription ကတော့ ဂိမျးစဝယျလိုကျတာနဲ့ ဂိမျးနဲ့ ၁ လစာ subscription တှဲပါလာတာမို့လို့ ရကျ ၃၀ စာ free အလကား ကစားရမှာပါ ။ နောကျ ဆကျကစားခငျြရငျတော့ subscription ကို Mog Station ကနေ ထညျ့ရတာ ဖွဈပါတယျ ။ ထညျ့နညျးကတော့ ၂ မြိုးရှိပါတယျ ။ Visa card နဲ့ ထညျ့နညျးနှငျ့ တဆငျ့ခံဖွဈတဲ့ Crysta သုံးပွီး ထညျ့နညျးပါ ။ Visa card နဲ့ ထညျ့ရတဲ့ နညျးကတော့ ကိုယျ့ Visa card ရဲ့ information တှေ ရိုကျထညျ့ပေးရပွီး payment မှာ Visa card နဲ့ ခြိတျလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ Visa card နဲ့ လှမျးခြိတျလိုကျရငျတော့ subscription တဈလစာ ကုနျတိုငျး ကိုယျ့ Visa card ထဲက အလိုလို ဖွတျသှားပွီး နောကျတဈလစာ auto subscription လုပျပေးသှားပါတယျ ။ Visa card ထဲ $ ရှိသလောကျ သူက auto နှုတျယူသှားတယျ ။ ဒါကို recurring လို့ ချေါပါတယျ ။ ဒီလိုနညျးကိုတော့ boss တှကေလှဲလို့ ကနျြတဲ့သူတှေ သိပျမသုံးကွဘူး ။ Crysta အသုံးပွုထညျ့နညျးကတော့ လူသုံးမြားကွပါတယျ ။ Crysta ကတော့ Final Fantasy XIV မှာ သုံးရလှယျအောငျ ဖနျတီးထားတဲ့ Square Enix ရဲ့ ငှကွေေးလှဲလှယျပစ်စညျး တဈခုပါ ။ Crysta ကို Visa Card နဲ့ ဝယျရပါတယျ ။ Crysta ကို အနညျးဆုံး 5$ ကနေ အမြားဆုံး $100 အထိ ဝယျလို့ရတယျ ။ 1$ = 100 Crysta .... 5$ ဆို Crysta 500 ရမယျ ။ အဲ့ဒီ Crysta နဲ့မှ Subscription ဝယျလို့ရသလို Mog Station မှာ ရောငျးနတောတှေ ဝယျလို့ရတယျ ။ Crysta နဲ့ ဝယျနညျးသုံးရငျ Visa card ကို ခြိတျစရာမလိုဘူး ။ ရိုးရိုး အှနျလိုငျးပျေါ ပစ်စညျးတှေ ဝယျသလို ဂိမျးဝယျသလို ဒီအတိုငျး ဝယျရုံပါပဲ ။ ဒါပမေယျ့ Crysta ပိုနလေို့ ဆိုပွီး သူမြားကို လှဲပေးလို့ မရပါဘူး ။ ဒါကွောငျ့ Crysta ကို ကိုယျလိုသလောကျ ဆော့နိုငျသလောကျ ဝယျထညျ့ပွီး ဆော့တာ အကောငျးဆုံးပါပဲ ။ ကနြျောတော့ crysta ပဲ လိုသလောကျ ဝယျထညျ့ဆော့ပါတယျ ။
Subscription မှာ Entry (12.99$) နှငျ့ Standard (13.99$) ဆိုပွီး အမြိုးအစား ၂ မြိုး ရှိပါတယျ ။ Entry ကတော့ စြေးနညျးတယျ ။ ရှေးခယျြစရာ ရကျ ၃၀ စာ တဈမြိုးပဲ ရှိတယျ ။ ဒါပမေယျ့ Server တဈခုမှာ character တဈယောကျပဲ ကစားခှငျ့ရှိတယျ ။ server တဈခုမှာ character တဈယောကျစီနဲ့ ကိုယျ create လုပျပွီး ကစားနိုငျမယျ့ character အရအေတှကျကတော့ အမြားဆုံး ၈ ယောကျပါ ။ Standard ကတြော့ ရှေးခယျြစရာမြားပွီး server တဈခုမှာ create လုပျ ကစားနိုငျမယျ့ character အရအေတှကျ ၈ ယောကျ ဖွဈသှားပါတယျ ။ server တဈခုမှာ character ၈ ယောကျစီနဲ့ server ၈ ခုမှာ ပွုလုပျခှငျ့ရမှာ ဖွဈပွီး စုစုပေါငျး character အယောကျ ၄၀ ဖနျတီး ကစားနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ ။ Crysta တှေ Visa card တှမေသုံးပဲ Game time card ဆိုတာ သုံးပွီး Subscription ထညျ့နညျးရှိသေးတယျ ။ Game Time card ကတော့ key အမြိုးအစား ဖွဈပွီး standard နှုနျးနဲ့ ရကျ ၆၀ စာ Subscription နဲ့ လာလရှေိ့ပါတယျ ။ Mog station မှာ key ထညျ့လိုကျရုံပါပဲ ။ Game Time Card ကတော့ online market တျောတျောမြားမြားမှာ ရောငျးပါတယျ ။
Steam version ဝယျထားသူတှအေနနေဲ့ steam wallet ကို သုံးပွီး Subscription လုပျလို့ရတယျ ။ ကိုယျ့ Mog Station account ထဲ ဝငျလို့ Subscription payment method အကနျ့အောကျမှာ ရှေးခယျြစရာ Steam wallet ဆိုတဲ့ option လေး ရှိနတော တှရေ့ပါလိမျ့မယျ ။ ဒီနတေဆငျ့ Subscription လုပျလို့ရပါတယျ ။
PS4 မှာရော PC မှာပါ account တဈခုတညျးနဲ့ပဲ ကစားခငျြတယျ။ ဒီလို ကစားလို့ရလား?
ကစားလို့ ရပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလို ကစားဖို့ဆိုရငျ account တဈခုတညျးမှာ PS4 version ရော PC version ပါ ဝယျထားရမှာ ဖွဈပါတယျ ။
Internet data အစား မြားလား?
ကနြျော တှကျပွပါမယျ ။ ကနြျောက PC မှာ ကစားပါတယျ ။ ညနေ ၆ နာရီခှဲကနေ ည ၁၂ နာရီခှဲ အထိ မထတမျး ကစားပါတယျ ။ ဒီလို ကစားတဲ့အခြိနျမှာ Dungeon တှေ အဆကျမပွတျ ဝငျတယျ ။ Trial တှေ Raid တှေ ဝငျကစားတယျ ။ ဂိမျးထဲက တခကျြမှ မထှကျပဲ ကစားတာတောငျ 50MB ကြျောကြျောပဲ ကုနျပါတယျ ။ ဒါ ပုံမှနျပါ ။ နောကျက ဘာ download ဆှဲ ညာ download ဆှဲတာ ရှိရငျတော့ 100mb ကြျော တကျသှားတတျတယျ ။ PC ဆိုရငျတော့ သိကွတဲ့အတိုငျးပဲ internet လိုငျးကို ဘယျအပေါကျက ဆှဲနကွေမှနျးကို မသိဘူး ။ အဲ့ဒါတောငျမှ ဒီလောကျပဲ ကုနျတာပါ ။ တခွား MOBA ဂိမျးတှထေကျ အတျောကွီးကို data အဆှဲ နညျးပါတယျ ။
(စာထဲမှာ bro chit ko ရေးထားတဲ့ စာတှေ ညှပျထညျ့ထားတာမို့ အဲ့ဒါတှအေတှကျ bro chit ko ကို credit ပေးပါတယျ ။)
ဖတျပေးတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျပါတယျ ။ Final Fantasy XIV အခုမှ စ ကစားမယျ့သူတှအေတှကျ အကူအညီ ဖွဈလိမျ့မယျ မြှျောလငျ့ပါတယျ ။
Final Fantasy Games Games Guide SquareEnix